Ungasithenga Kanjani Isizinda Esivele Sibhalisiwe | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 4, i-2014 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 4, i-2014 Douglas Karr
Ubukade ukhona… uklwebha phansi umbono omusha wezigidigidi zama dollar ku-napkin ye-cocktail, bese uya ekhaya futhi uthole ukuthi isizinda sesivele sithathiwe. Enye ingxenye iyaqhubeka nokuqoqa amagama wesizinda elinde ukwenza izigidigidi zamaRandi. Iningi lethu liphakathi nendawo… abanikazi besizinda abangazisebenzisi izizinda zabo ngokujwayelekile bazobathengisa. Nosomabhizinisi abafisa ukuzithenga kukhona uzimisele ukuchitha izinkulungwane zemali ukuzithola.
Izizinda ezibhalisiwe ezingenayo iwebhusayithi ehlotshaniswa nazo zivame ukuthengwa ngabaqageli abasebhange ngokwenza inzuzo ngokuthenga igama abanethemba lokuthi ngeke liphikiswe kumthengi wesikhathi esizayo.
Ungayeki ngenxa yokuthi isizinda sakho sithathiwe! Ngithengise isizinda ngemali engango- $ 10,000 (eminyakeni embalwa edlule) futhi ngawathenga ngemali ephansi njenge- $ 100. Umdlalo omnandi wekati negundane phakathi komthengi nomthengisi… kepha uma udinga leso sizinda, ungasithola! Bheka le infographic kusuka ku- Izayeting.com ngokuthi ungasithenga kanjani isizinda esivele sibhalisiwe.
Siyabonga ngokuthumela le-infographic Douglas .. Kuyiqiniso ukuthi awudingi ukuyeka ngenxa yokuthi isizinda sakho sesivele sithathiwe. Ngokwami ​​okuhlangenwe nakho, ngithenge isizinda esithile esibhalisiwe futhi iningi lazo alisebenzi. Kuyindaba nje yokuhlola isimo sezulu uma kungenzeka ukuthenga leso sizinda esithile. Futhi mhlawumbe yingakho i-flickr.com ithenge igama lesizinda i-flicker.com